भदौ तेस्रो साता फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो हुने
काठमाडौं, २४ असार–‘फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो’फर्नेक्स आगामी भदौ १४ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने भएको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी एक्स्पोकोआयोजक संस्था नेपाल फर्निचर्स तथा फर्निसिङ संघले यस्तो जानकारी दिएको हो ।
एक्स्पोको छैठौं संस्करण फर्नेक्स २०१८ लाई होम डेकोर विशेष बनाइने संघले जनाएको छ ।बढ्दो आधुनिक जीवनशैलीसँगै बढ्दै गएको इन्टेरियर डिजाइनका लागि एक्स्पो उचित गन्तव्य हुने बताइएको छ । एक्स्पोको व्यवस्थापन इभेण्ट सोलुसन प्रालिले गर्ने बताइएको छ ।
किचन, बेडरूम, बाथरूमका साथै आउटडोर फर्निचर, इण्टेरियर डिजाइनर, कार्पेट, मार्बललगायत सामग्री प्रदर्शनीको मुख्य आकर्षण रहने आयोजकले बताएको छ । यसैगरि कार्पेट, पर्दा, म्याट्रेस, डेकोरेशन सामग्री, होम डेकोर, अफिस फर्निर, होम अप्लाइन्सेज, मेशिनरी औजारका साथै वास्तुसँग सम्बन्धित उत्पादन प्रदर्शनीको आकर्षण बन्ने आयोजकले जनाएको छ ।
प्रदर्शनीमा फर्निचरको प्रदर्शनी मात्र नगरी त्यसका उपयोगिता, प्रयोग विधि, बनोटका बारेमा पनि अवलोकनकर्तालाई जानकारी गराउने आयोजकको भनाई छ । यसका अलावा फर्निसिङ व्यवसायमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउँदै फर्निचरजन्य उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन एक्स्पोले टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मौलिक तथा परम्परागत फर्निचरका साथै आधुनिक शैलीका फर्निचरका उत्पादनका बारेमा जानकारी लिन सेवाग्राहीलाई एक्स्पो उचित गन्तव्य हुने संघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । उनले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिदिन आम उपभोक्तालाई आग्रह गर्दै उनले नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङमा आत्मनिर्भर हुने बाटो अघि बढेको बताए ।
वर्षेनी आयोजना हुँदै आएको एक्स्पोको छैठौं संस्करणबाट व्यवसायी तथा उपभोक्ता दुवै लाभान्वित हुने फर्नेक्स–२०१८ का संयोजक शुभेन्द्र जोशी को भनाई छ ।
एक्स्पो व्यवस्थापन गरेको इभेण्ट सोलुसन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक विजय सागर प्रधानले फरक शैलीमा एक्स्पोको छैठौं संस्करण आयोजना हुन लागेको बताए । फर्निचर क्षेत्रको प्रविधि अवलोकनकर्ताको मूख्य आकर्षण बन्न सक्ने उनको भनाई छ ।
५ दिनसम्म चल्ले एक्स्पोमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी १ सय बढी फर्निचर र फर्निसिङ सामग्रीका स्टल रहनेछन् । नेपालमा उपलब्ध फर्निचर तथा फर्निसिङका उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विगत सन् २०१२ देखि नियमित रुपमा एक्स्पो आयोजना हुँदै आएको छ ।
नेपालमा वर्षेनी फर्निचर तथा फर्निसिङका उत्पादनहरुको ३० अर्ब रुपैंया बराबरको कारोबार हुने गरेको आँकलन छ ।
असार २४, २०७५ मा प्रकाशित
बुटवलको ‘सिक्स लेन’ सडकमा एसी बस सरर ...
घरबाट कमिला भगाउने सरल उपाय
२३ वर्षे युवकले गरे ९१ वर्षीया महिलासँग बिहे, अहिले भयो हंगामा
अण्डा मांसाहारी कि साकाहारी ? यस्तो छ वास्तविकता
हृदयघात हुनुभन्दा एक महिनाअघि शरीरले दिन थाल्छ यस्ता संकेत
चीनमा घरको छतमा खेती !
४० एसपीको सरुवा र २६ को पदस्थापना, सानेपामा नेता–कार्यकर्ताबीच बाझाबाझ काठमाडौं– प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार नेपाल प्रहरीका ४० एसपीहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयको सहमतिमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले उनीहर...
उप महान्यायाधिवक्ताको हत्या
१४ वर्षीया बालिका वलात्कार गर्ने ६५ वर्षीय सिंहेश्वर पाण्डेलाई ६ वर्ष जेल
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, नेपालमा के हुन्छ ?
भारतीय क्लबलाई नेपाली टोलीले ८–० गोल अन्तरले हरायो
विधानबारे काङ्ग्रेसमा छलफल ,अर्को बैठक फागुन १२ मा
संसद्लाई अझै कति बदनाम बनाउने ?
न्याय मर्‍यो ! विद्रोह गर्ने कि अन्याय सहने ?
- डा. राजेन्द्र उप्रेती पूरा पढ्नुहोस